सिरानीमुनी सुत्ने बेला तुलसीको पात राख्दा के फाइदा हुन्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
सिरानीमुनी सुत्ने बेला तुलसीको पात राख्दा के फाइदा हुन्छ ?
कातुलसी एउटा विरुवा मात्र होइन यसको वहुउपयोगी गुण छ । औषधीय गुणका रुपमा तुलसी जति महत्वपूर्ण छ धार्मीक रुपमा पनि हिन्दु धर्ममा निकै पवित्र मानिन्छ । हिन्दु धर्ममा तुलसी बिना धर्म संस्कार पनि पुरा हुँदैन ।